Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Tandremo sao lasa fitaovana miiba
Inty sy Nday : Tandremo sao lasa fitaovana miiba
Isan’ny fanapahan-kevitra nivoaka tao anivon’ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra ny Alarobia teo ny fankatoavana ny fananganana ny orinasa “SPM” (State Procurement of Madagascar) mba hanafatra sy hitsinjara entana ho an’ny mponina, dia ireo entana tena ilain’ny mponina andavanandro (PPN) sy ireo entana iankinan’ny aim-bahoaka toy ny solika.
Io no nantsangana dia noho ny fahatsapana, hoy ny tatitry ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra, fa mitarika fahasahiranana ho an’ny vahoaka ny fiankinan-doha be loatra amin’ireo orinasa izay manararaotra eo amin’ny fitsinjarana sy fanafarana entana avy any ivelany ka mampidangana ny vidim-piainana izay mila tsy ho takatra ny ankamaroan’ny Malagasy ary tsy mitarika ho amin’ny fandrosoana.
Fanapahan-kevitra mendrika ny vanim-potoana ankehitriny io, satria midika ho fitsinjovana ny vahoaka. Isan’ny teboka nandrandrain’ny maro an’izao fitondrana ankehitriny izao ny fijerena manokana ny olana ateraky ny fidangan’ny vidim-piainana sy ny tontolon’ny solika mbamin’ny herin’aratra.
Ny tokony hovahana koa anefa dia ny fiheverana ny tokony hahatafalatsaka any anivon’ny fiaraha-monina an’io rafitra “SPM” io, ka rariny kokoa raha natao amin’ny teny malagasy ny fanalavana azy.
Etsy ankilany, mba tsy hifanomezan-tsiny dia rariny sy hitsiny ary tena ara-dalàna sy endriky ny tena fikatsahana ny tombontsoam-bahoaka ny hametrahana fepetra hentitra hiantoka ny fifampifehezana sy fanaraha-maso ny fiasan’io “SPM” io. Tsy afenina fa efa nifanakianana teto ny resaka ampihimamba (monopole) ka sao sanatriavin’ny vava, hirona mankany amin’izany ity tetik’asa natao hikatsahana ny tombontsoam-bahoaka ity. Na izany koa aza anefa, raha tena mahafa-po ny vahoaka nefa manome vahana koa ny fivelaran’ny fihariana ankapobeny eto izany, dia tsy hisy hitora-bato eo.
Ankoatra izay, antenain’ny betsaka fa tsy ho sehatra hanome vahana na laka ny fikatsahana tombontsoa manokana ho an’ny mpitantana isan’ambaratonga indray ity rafitra “SPM” ity, na ho tsy miankina amin’ny fanjakana ny hitantana azy na rafi-panjakana no hiantsoroka azy.
Maro ny tranga niseho teto amin’ny firenena izay ka antenaina fa mba hahay hisintona lesona isika amin’izao fotoana, mba tsy hiteraka disadisa amin’ny vahoaka.